Wood Archives - Dafne Kere
Home shop Nkume: Osisi
Home / shop / Ngwaahịa akpadoro "osisi"
Osisi a na-eji osisi rụọ - (UL)
Okpokoro na okpokoro osisi a kpara akpa - (UL)
Chandelier na osisi lampshade - (UL)
Ebe ụmụaka na ụmụ ha na-eme ihe ndozi na ihe ndị e ji eme ihe - akụkụ: 175 cm x X NUMX cm - [Usoro: Dafne-Legno] - (DF235)
343€ Aggiungi al carrello
N. 6 (Sei) Iri oche n'ime ahihia - Akuku: cm. 41 x 55 x 92h
Chandelier mma na osisi - (UL)
Osisi oriọna nke eji osisi - (UL)
N. 6 (isii) Mkpuru osisi na - eri nri - Akụkụ: cm. 41 x 55 x 92h
N. 6 (isii) Ụlọ iri ihe na - enwe mmetụta nke ukpa - Akụkụ: cm. 41 x 55 x 92h
Okpokoro okpokoro mere nke osisi poplar - akụkụ cm. 100 x 100 x 80h
Mgbakwunye okpokoro akụkụ anọ n'ime osisi poplar - akụkụ cm. 120 x 80 x 80h
Teepu okpokoro n'osisi poplar - Akụkụ cm. 100 x 100 x 80h
Teepu okpokoro n'osisi poplar - Akụkụ cm. 160 x 86 x 80h
Mgbakwunye okpokoro akụkụ anọ n'ime osisi poplar - akụkụ cm. 160 x 85 x 80h
Akara paini osisi okpokoro - Dimensions cm. 250 x 120 x 78h
832€ Aggiungi al carrello
Teepu okpokoro n'osisi poplar - Akụkụ cm. 180 x 85 x 80h
1.079€ Aggiungi al carrello